Famelaberan-kevitra Avy Amin’ny Venezoeliana Iray Sahiran-tsaina: Ny Holatry Ny Tantara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2017 4:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, русский, Italiano, Français, Español
“Talantalana toa banga ao amin'ity fivarotana lehibe ao atsinanan'ny tanàna ity. Nanipika ny manampahefana fa tsy hisy ny tsy fahampian-tsakafo sy fanafody atsy ho atsy. Nampihena ny fitehirizana izany fanambarana izany.” SARY: Eneas de Troya (CC BY 2.0)
Andro vitsy lasa izay, nilaza tamiko ny iray tamin'ireo namako efa ela fa rehefa avy nifindra-monina izy, dia nahita ny tenany fa mankahala ny maha Venezoeliana azy. Izany no tena andian-teny nampiasainy. Tsy fantatro izay tokony holazaina, mijery ny tavany ao amin'ny efijery Skype ao anaty fahatsapana fiahiana sy fangirifiriana lehibe.
“Marina izany. Vao avy nandao ny firenena ianao ary mahita fa tena fadiranovana isika.”
Nipi-maso aho, ao an-tendako ny tahotra sy fahatezerana. Toa nahatsikaritra ny tsy fahazoako aina ilay namako ary nanetsika ny lohany tamim-pangorahana.
“Fantatro fa tsy azonao ilay izy.”
“Ny zavatra tsy azoko dia ny hevitry ny firenena ahitan-doza sy korontana izay mahakasika ny zom-pirenenao, ny tantaranao, ny maha ianao anao. Tsy hoe mandà ny zava-mitranga ao aho, tsy ho ataoko mihitsy izany. Saingy zavatra hafa mihitsy no lazainao
“Nasionalista kokoa tsy araka ny eritreretinao ve ianao?”
Mampahatezitra sy mahakivy ahy ny fanontaniana roa. Fifangaroana tsy fahita firy amin'ny fihetseham-po mifandray mivantana amin'ny fomba mbola ahatakarako ny firenena, ary indrindra indrindra, ny fomba iainako izany. Mahatsapa tebiteby aho noho ny fiheverana fa i Venezoela, firenena nahaterahako sy nahalehibe ahy, dia lasa karazana mariky ny fanaintainana, fahakiviana sy fahadisoam-panantenana izay mampahory ny ankamaroan'ny Venezoeliana. Tahaka ny hoe rava sy very ihany koa ny zom-pirenentsika, hevitra manokana mampisafotofoto izay mamaritra antsika ao anatin'ny hevitra malalaka kokoa momba ny toerana sokajiantsika fa antsika, tahaka ny zavatra maro hafa rehetra izay mety mamaritra antsika. Angamba marina izany, hoy aho mihevitra am-pahatahorana. Angamba ny maha Venezoeliana dia tsy mikasika intsony ny hoe iza moa isika, fa zavatra hafa kokoa toy ny tahotra, taratry ny fahoriana kely maromaro zakaintsika.
“Tsy momba ny fanindrahindram-pirenena izany,” hoy aho, “fa momba ny zava-misy fa hitako fa tsy rariny ny fitambaran'ny krizy iainantsika sy ny fomba andraisantsika ny tenantsika. Zavatra tafahoatra izay mahatonga antsika hanao tsinontsinona ny zava-drehetra mety ho Venezoelà, mihoatra noho ity krizy ity. Izany no tiako holazaina. “
“Isika no ity krizy ity,” hoy ilay namako, niteny tsy fidiny. “Tsy hitanao angaha? Tsy mikasika ny rafitra ara-politika fotsiny izay nivadika ho fitaka ara-tantara izany, fa momba ny fanekena tsy fidiny amin'ny ankapobeny, fanekena ny toe-javatra izay manana fifandraisana mivantana amin'ny maha Venezoelà sy ny nanjariany tao anatin'ny taona vitsy lasa. Aza milaza amiko fa tsy manana andraikitra ao anatin'ity krizy ity ny Venezoeliana. Tsy ny fangorahan'izy ireo, ny tsy fandraisana andraikitra, ny tsy firaharahian'izy ireo no nitondra ny firenena ao anatin'ity hantsana ity izany. Tsy afaka ny tsy hanan-tsiny toy izany ianao! “
Tsy izany aho. Saingy mandray ny zavatra amin'ny fomba hafa ianao raha anisan'ny zavatra iainanao andavanandro ny krizy. Na izany tahotra entinao na aiza na aiza, ny fahatsapana fahasorenana sy ny firaviravian-tanana, tsy mora ny mahatakatra ny toe-draharaha amin'ny ankapobeny ao amin'ny firenena, raha mbola ao anatin'izany ianao. Na izany aza, toa manafintohina ny mihevitra ho tompon'andraikitra amin'izay zavatra iainantsika satria hoe tsy fantatsika ny fomba hiatrehana izany. Eny, manaiky aho fa angamba tsy manana fomba fijery mivaingana sy mivelatra momba ny haratsian'ny ara-politika sy ara-toekarena atrehintsika aho. Mihevitra aho fa indraindray misy ny fomba fijery manidina, na tsotsotra mikasika ny toe-javatra miha-sarotra atrehintsika. Saingy misy ny fahasamihafana eo amin'ny fomba fijerintsika ny zavatra iainantsika – sy ny fiantraikan'izany amintsika – ary ny zava-misy fa ity fomba fijery ny zavatra mampahory antsika ity dia manimba zavatra hafa. Manaisotra amintsika ny fahatsiarovana ara-tantara mihitsy aza.
“Toerana miroborobo tsara indrindra ho an'ny lehilahy tahaka an'i Chavez i Venezoelà mba hanaovana indrindra izay nataony,” hoy ny namako nanizingizina. “Tsy hitanao? Navadik'i Chavez ho fitaovam-piadiana ara-politika ny lolom-po ara-tsosialy, ny fialonana sy ny faharefoan'ny Venezoeliana. Nahatonga ny fankahalàna sy ny fanilikilihana ary fanaratsiana ny hafa izany. Nataon'ny Chavisma hahazoana tombontsoa ny fankahalana. “
Nifindra monina niala an'i Venezoelà ny namako folo taona lasa izay, nitsoaka izay mety ho zavatra ataon'ny Chavisma fotsiny. Tamin'izany fotoana izany, mbola nahitana karazan-javatra ara-dalàna ny firenena, fahitàna mamitaka momba ny demokrasia azo hatsaraina. Saingy efa tena mazava tsara fa ny fanapahan-kevitry ny mpitarika mahasarika sy tsy miraharaha andraikitra dia nitarika tany amin'ny krizy mandravarava, izay miantraika amin'ny zava-drehetra folo taona tatỳ aoriana. Tsaroako ny resaka farany nataony alohan'ny nialàna ny firenena, ny fatahorako ny hevitra fotsiny hoe inona no azon'ny rafitra tsy nahomby mifototra amin'ny fanarahamaso atao. Ary, ny mampiahiahy kokoa, dia inona no dikan'ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny mponina dia mifidy matetika sy amin-kitsimpo mpitarika ara-politika adalan'ny fananganana rafitra ara-politika eo amin'ny lavenon'ny firenena.
“Tsy mamela heloka na iza na iza ny kominisma ,” hoy izy tamiko: Ambany kokoa noho i Venezoelà. Mihady ny fasany manokana, ny fandraisany manokana ny sosialismam-panjakana ny Venezoeliana. Ary manao izany izy noho ny fomba fahatakarany ny firenena ho tetikasa.”
Mety mila folo taona aho mba hahatakatra izany andian-teny izany. Sy hiatrehana ny maridrefiny ary miaritra ny fiantraikan'ny tetikasa ara-politika mivantana izay ny tanjona lehibe dia ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana amin'ny fiainan'ny olom-pirenena rehetra. Fitondran'olo-tokana mifototra amin'ny fankahalana, fanilikilihana sy fanasaziana ny fahasamihafàna. Na izany aza, tsy afaka miaiky aho fa ny firenena—amin'ny maha singa sy ny vinan'ny hoavy—dia “tompon'antoka” amin'ny toe-javatra tsy azo leferina. Ny fahadisoam-panantenana manan-tantara an'ny Chavisma dia fanamelohana an'i Venezoelà taloha sy ankehitriny ary ambonin'izany rehetra izany, ny ho fanjariany.
“Tsy mino izany ianao satria ho anao, “kreola” Venezoeliana mora taitaitra, dia naormaly ny fiankinantsika amin'ny fanjakana, ny baranahina sy ny firaketana. Mihevitra ianao fa tsy azo ihodivirana ho an'ny firenena ny ho anatin'ny fomba amam-panao taloha mahatakatra ny fahefana ho fanandevozana. ‘Fanahin'ny andevo’, hoy ny fiantson'ny mpandalina sasany. Na izaho aza lasa nino izany tamin'ny farany. Izany no fomba fijery iray ny firenena mifototra amin'ny fihantsiana, fifandirana ary fankahalana. Tsy azo ihodivirana izany ary miharatsy sy mampiahiahy hatrany. Inona no hevitrao momba ny Chavisma fa tsy taratry ny ratsy indrindra amin'ny maha antsika? “
Heverina fa manevateva sy miavonavona ny fihevitry ny namako raha tsy ao anatin'ny ahiahiany feno fahatsoram-po. Ary angamba tsy mifototra amin'ny hevitry ny firenena ho tetikasa mahakasika ny maro ihany ny olana, fa amin'ity fikasana tsy nahomby hanaiky fa mifototra amin'ny maha antsika antsika i Venezoela. Ho an'ny namako sy ny maro hafa toa azy, tsy iza akory i Venezoela fa ohatra mazava amin'ny fahalavoan'ny maha-firenena iray, ny fiaraha-miainan'ny fahasamihafana izay mety mitazona ny fiarahamonina ary angamba ny fomba ara-kolontsaina mihitsy aza. Inona i Venezoela amin'izao fotoana izao? Iza moa izahay, Venezoeliana tafavoaka velona tamin'ity faharesena manan-tantara ity? Tsy fantatro, hoy aho, miezaka mihazona ny ranomasoko, ary angamba izany fisalasalana izany no lafiny mampalahelo indrindra amin'ny toe-javatra izay miharatsy isan'andro isan'andro, ary lasa tsy hay zakaina amin'ny ambaratonga ifotony.
“Ny Venezoeliana no namorona ny Chavisma amin'ny endrik'izy ireo sy mitovy amin'izy ireo, fa tsy tamin'ny zavatra hafa, araka ny finoan'ny olona matetika” hoy ny namako mamarana, tamin'ny feo iva sy malahelo. “Inona tokoa no atao hoe Chavisma? Ireo kilema sy hirifiry tsirairay amin'ny maha Venezoeliana nadika amin'ny endrika politika izany. Izany dia fampanofana nentina ho amin'ny lafiny politika vaovao sy mampidi-doza. Ilay fisian'ny fankahalana miafina izay noheverin'ny Venezoeliana hatrany fa fanilikilihana. Raha manohy tahaka izany ny Chavisma, dia satria maro ny Venezoeliana tsy afaka miady amin'ny ny zava-tsarotra iainan'izy ireo manokana. Satria Chavisma mihitsy no dragona ao anatin'ny dragona. Hevitra tena sarotra mikasika ny fomba fifankahazoantsika sy ny firenena. Firenena Chavista i Venezoela talohan'ny nisian'i Chávez.”
Nieritreritra izany teny izany foana aho nandritra ny ora maro; azo antoka fa mandritra ny herinandro maromaro mihitsy aza. Ao anatin'ny fifangaroan'ny fanaintainana sy ny tahotra sarotra hazavaina. Ahoana no fahitanao sy fahatakaranao ny andraikitra ara-tantara, raha lasa anisan'ny fijery ny fahefana ny zavatra ratsy indrindra mikasika ny firenena nahaterahanao?
04 Jona 2018Mediam-bahoaka
Miteraka horohoro ny fakana an-keriny sy ny vono olona any Ogandà